» ‘नबिल-एनबी एक्विजिसन’ गिजोल्न व्यापक प्रयास, सर्वोच्चको अल्पकालीनले निम्त्यायो झमेला
‘नबिल-एनबी एक्विजिसन’ गिजोल्न व्यापक प्रयास, सर्वोच्चको अल्पकालीनले निम्त्यायो झमेला
२०७९ बैशाख ३०, शुक्रबार १४:०४
काठमाडौं । मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारसभा गर्न ठीक्क परेका बसेका नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई झमेला थपिएको छ । गत पुस अन्तिममै सम्झौता भएको दुई बैंकको मर्जरलाई विभिन्त तत्वले गिजोल्ने प्रयास गरेका हुन् । त्यसमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले झन् अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
नबिलले नेपाल बंगलादेशलाई १०० बराबर ४३ को अनुपातमा प्राप्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसलाई सफल बनाउन नदिन नेपाल बंगलादेश सेयरहोल्डरहरूमध्ये एउटा समूह लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको एनबी इन्टरनेसनल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड लागिपरेका थिए ।
अहिले भने सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएको छ जसका कारण मर्जर प्रक्रिया थप गिजोलिन सक्न संकेत गरेको छ । दिव्येश्वरी इन्भेष्टमेन्टले नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक र सञ्चालकलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई जेठ ३ गते बोलाइएको छ ।
दिव्यश्वरीले जस्तै अर्को रिट नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पनि हालेको छ । नबिल बैंकसमेत नेपाल बंगलादेश लाई पनि विपक्षी बनाइएको सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन कि नदिने भनेर जेठ ३ गते नै बोलाइएको छ ।
न्यायधीस बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजालसले यस्तो आदेश दिएको छ । जेठ ३ गते हुने संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिए नबिल र नेपाल बंगलादेशको मर्जर थप गिजोलिने बताइएको छ ।
दुवैं बैंकले एक्विजिसनको विशेष प्रस्तावसहित जेठ ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । जानकारका अनुसार नेपाल बंगलादेशको मुख्य सेयरधनी मध्ये एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल बंगलादेशको बंगलादेशी साहु कम्पनी आएफआईसीसँग सेयर किन्ने सम्झौता गरेर पनि किन्न नपाएका मोतिलाल दुगड मर्जर भाँड्न चाहन्छन् ।
दुई बैंकलाई एक बन्न नदिन श्रेष्ठ र दुगडसँगै अन्य व्यवसायीहरू पनि लागि परेका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर अल्पकालीन अन्तरिम पाउने दिव्येश्वरी इन्भेष्टमेन्टमा दुगडसहित शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा र पशुपति मुरारका समेतको लगानी छ । उनीहरू पनि नेपाल बंगलादेशलाई नबिलकहाँ सुम्पन दिनु नहुने पक्षमा छन् ।
चौधरी समूहले नेपाल बंगलादेशको सेयर किन्न ६ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ जुटाउनुपर्नेछ । त्यतिको ठूलो रकम जुटाउन पनि समय लाग्ने बताइएको छ ।
नेपाल बंगलादेशको सेयर किन्न सनराइजका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड फिट एन्ड प्रपर टेस्टमा फेल हुने बताइएको छ । अर्का दावेदार श्रेष्ठ वर्षदिन अघि नै फिट एन्ड प्रपरमा फेल भइसकेका हुन् ।
प्रतिकित्ता रु १५० मा सारिका चौधरीलाई नै सेयर बेच्ने पक्का भइसक्योः आईएफआईसी
नेपाल बंगलादेशमा रहेको आईएफआईसीको सेयर चौधरीले किन्न यसकारण मिल्छ, दुगडले यसकारण मिल्दैन !
यसरी भयो नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश ‘प्राप्ति’ गर्ने सम्झौता, वित्तीय सूचकांकमा झन् अब्बल बन्नेछ नबिल
नेपाली बैंकिङ इण्डष्ट्रीमा व्यावसायिक भविष्य नदेखेपछि २७ वर्षपछि फर्कियो आईएफआईसी
स्वाप रेसियो बार्गेनिङ चलिरहेको नबिल र एनबीको मर्जरमा सनराइजको छड्के !
मर्जरमा असफलताको स्वाद चाख्दै राष्ट्र बैंक, नीतिमा ‘नियत’ फेरिँदा सास्ती